State Fairgrounds Vaccine - Oromo / COVID-19 Updates and Information - State of Minnesota
Sagantaa Guddicha walitti qabama Minnesootaa irratti Talaallii keessan fudhadhaa!
Kiliniika Talaallii Hawaasaa COVID-19 iddoo yaaroo Isteeta Minnestootaati (State fair)
Talaallii keessan fudhadaa. $100 Fudhadhaa!
Talaalliiwwan COVID-19 tola, naga qabeessa fii buu’a qabeessa ta’e gara sagantaa Waloo Isteeta Minnesootaa’tti dhufaa jira!
Beellamni, waraqaan eenyummaa, ykn baraarsa(Inshuraansii) gaafatamuun hin jiru.
Dameen Fayyaa Minnesota, Ramsey County fi Homeland Health namoota namoota gara yaaroo Isteeta dhufani fii talaallii fudhachuuf ga’umsa qaban maraaf talaallii COVID-19 akka fudhataniif carraa keenna. Namootni Yaaroo Isteetaa dhufan talaallii Pfizer ykn Johnson & Johnson fudhachuuf Muummee Taatee Dhumaa Kaabaatti (North End Event Center) argamu kiliniika talaalii hawaasichaa dhaquu ni danda’u, akkasumas yeroo eeggachuu gabaabaa booda, gara gammachuu kan Sagantaa Walgahii Guddaa Minnesootaattidebi’u. Jiraattoti Minnesota umurii 12 fi isaa ol ta’an tallaallii fudhachuuf ga’oodha dha.
Yaaroo Isteeta Minnesootaa – Muummee Taatee Dhumaa Kaabaa
Hagayya 26 – Fulbaana 5: 9 waaree dura – 9 waaree booda. Beellamni inni dhumaa kan qabamu 8:00 p.m.
Fulbaana 6: 9 waaree dura – 8 waaree booda (Guyyaa Hojjataa). Beellamni inni dhumaa kan qabamu 7:00 p.m.
$100 Onneessituu Talaallii
Namootni doozii jalqabaa isaanii Yaaroo Isteeta Minnesota Kiliniika Talaallii Hawaasaa COVID-19 irratti fudhatan erga talaallii isaanii fudhatan booda ariitiin kaardii Kennaa Visa $100 ni fudhatu. Kaardiiwwan Kennaan kun nammoota talaallii doozii jalqabaa isaanii yaaroo Isteetaatti fudhatan namoota 3,600 jalqabaatiif ni kennama. Hin Turinaa!
Maaskii akka kaawwatanii fi ulaagaa fageenya hawaasaa irratti walii galuun isin irraa eegama.
Maqaa jalqabaa, maqaa akaakayyuu, guyyaa dhalootaa, fi tessoo mana keessani mirkaneessuun isini barbaachisa.
Waraqaa Eenyummaa agarsiisuun isini hin barbaachisu.
Baraarsa wal’aansaa isiniif hin barbaachisu.
Hiikaa Afaanii fi Mallattoo Afaanii Ameerikaanii (ASL) iddoo irratti fi sarara afaanii keessatti ni argama.
Haalli Mijjataa ADA iddoo irratti ni argama.
Kaartaa fi bakka Jila Mootummaa Iddoo Talaallii COVID-19 (State Fair COVID-19 Vaccination Site) (PDF)
Yaaroo Isteetaatti beellama argachuuf galmaa’aa
ykn 833-431-2053 irratti bilbilaa.
Beellama malee dhufuun ni dahda’ama ni jajjabeessinas!
Hiriyaa fi maatii keessan wantakanaaf akka qophaa’ani fi Yaaroo kanarratti talaallii isaanii akka fudhataan isaan jajjabeesuuf miidiyaa hawaasaa oli irraa geessituu beellamichaa gara #GreatMinnesotaVaxTogether tiif qoodaa!
Yaadannoo:  Namoonni talaaliif galmaa’an Yaariichatti seenuuf tikeetii Yaatoo Isteetaa bituuf amallee ni dirqamu.